Warra amantii dawoo godhatee siyaasa dhuunfasaani galmaan gahuuf soba dhugaa fakkeessan arguu hin feenu – jiraattota Jimmaa – Fana Broadcasting Corporate
Warra amantii dawoo godhatee siyaasa dhuunfasaani galmaan gahuuf soba dhugaa fakkeessan arguu hin feenu – jiraattota Jimmaa
Finfinnee, Qaammee 06,2011 (FBC) – Jiraattonni Godina Jimmaa warra amantii dawoo godhatee siyaasa dhuunfasaani galmaan gahuuf soba dhugaa fakkeessan dhagahus argus hinfeenu jedhan.
Jimmii biyyaa nageenyaati kanwaldhabe araarsu, kan rakkate nyaachise hammatee waliin jiraachuu abboota keenyatu nubarsiise jiraattoonni Godinichaa.
Warra amantii dawoo godhatee siyaasa dhuunfasaani galmaan gahuuf soba dhugaa fakkeessan, bataskanni osoo hin gubatiin gubate, abbaan amantii otoo hin du’iin du’e jedhani saba wal fuudhee walirra horee jaarraf waliin jiraate addan baasuuf socha’anni balaaleeffannaa jedhan.
Magaalaa Jimmaaa dirree hokkoraa godhuuf halkanii guyyaa nurraatti shira xaxaa jiru, dhagahus argus hinfeenu jedhan jiraattonni kunneen.
Nageenyi keenya harka keenya jira. Mana amantaa kiristaanas oobboloota keenya kiristaanas eegnee diinota keenyas niqaanessinas jedhaniru.
Toftaa dulloomaa amantiin nuqooduuf jijjirama biyyi itti jirtu danquuf, holola Oromoon biyya bulchuu hindanda’u jedhu milkeessuf dhama’anis fuldura dhaabbannee ni saaxilla jedhaniru.
Mariin dhimma nageenyaarratti xiyyeeffatuus Bakka bu’oota qaamoolee hawaasa Godina Jimmaa waliin taa’ameera.
Akka gabaasa OBN’tti mari kanarratti Hogganaa Biiroo Paabliki Sarvisii Oromiyaa Dr Biqilaa Hurrisaa, tasgaboofnee qeerroo fii dubartoota keenya gorfannee nageenya Jimmaafis wardiyyaa dhaabbachuu qabnaa jedhaniru.
Jimmii biyyaa jaalalaafii nageenyaati. Jimmii hammataadha nutis kanaan isin beekna. Ammas akkuma duriitti rakkoo dhuunfaa ergama siyaasa galmaan gahuuf, jijjirama argame gufachiisuuf socho’an dhaabuu saaxiluu qabdus jedhan Dr. Biqilaan.
Abbootiin Amantii Ortodoksii Finfinneerra maricharraatti argamanis namoota siyaasa dhuunfaa galmaan gahuuf amantii dawoo godhatan, uummannii saaxiluu qaba jedhaniiru.